Ukulungiswa kwe-Ultrasonic kwama-Brines - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-Brines yisisombululo sama-salts, isib. NaCl, KCl, KNO3, I-KClO3, I-CaCl3 emanzini, okulungiselelwe imboni yokudla, ukulima izinhlanzi noma ukushisa amanzi.
Inqubo yokuqothula usawoti emanzini ingaba isikhathi esiningi, lapho kungenasetshenziswa noma kungabi khona okwanele.
Ukuze kulungiswe izimboni ze-brines, ukuchithwa kwe-ultrasonic kuyindlela ehle kakhulu yokufinyelela amazinga aphezulu okuchithwa nokuphakama okuphezulu.
Izakhi eziningi zezimboni zidinga ukuchithwa kwezithako ezifana nosawoti kanye noshukela. Embonini, ama-salt brines asetshenziswa njengama-anti-frozen, njengama-stabilizers, njenge-condiment kanye ne-conservative (isib. Emkhakheni wezokudla), ukulungiselela amanzi abizayo (isib. Embonini yezolimo) noma njengezinto zokuqala ze-electrolysis.
Amafutha omunyu ayaziwa ngemiphumela yawo ekunciphiseni iphuzu lokuqhwaza, okwenza kube i-refrigerant yesibili ewusizo. Ngaphezu kwalokho, usawoti usiza ukuzinzisa izinhlayiya ekumiswe futhi kuvimbele ukulungiswa kwazo. Lokhu kwenza amabhilidi ahlanganiswe kakhulu ekusetshenzisweni komkhiqizo.
Usawoti phansi kwe-batch noma i-tank idinga izinsuku eziningana ukuze zichithe ngaphandle kokuxubana kwamashini. Njengoba kukhulunywa ngosawoti okwandayo, ukwehla kwamazinga kunciphisa kakhulu. Ikakhulukazi amaphesenti wokugcina yesisombululo esikhulu (isib. SAL 90 °) kuthatha isikhathi eside ukuchitha.
Amasila, okuyinto okunzima ukuyihlakaza njenge-BaSO4, I-PbS, i-HgS, i-AgCl, idinga ukuhlukumeza okukhulu okuzoqedwa ngokuphelele.
Ukuqeda amandla kungenye yamandla amaningi okusetshenziswa kwe-ultrasonication. Le vidiyo ikhombisa ukuqedwa okusheshayo kweSalt Crystals emanzini kusetshenziswa iHielscher UP200St.
Ukuqunjelwa kwe-Crystals yeSawoti Emanzini usebenzisa i-UP200St
Amandla okugaya ama-ultrasound anamandla anikezela amandla adingekayo ukuze ahlakaze izinto ezincibilikayo, isib. Usawoti noma ushukela. I-shear enamandla ikhiqizwa, uma amagagasi amakhulu e-ultrasonic ehlanganiswa abe yiziphuzo kanye nama-slurries okwenza kube namandla cavitation. Ku cavitational “indawo eshisayo”, izimo ezimbi kakhulu zikhona njengoba kutholakala ezindaweni eziphezulu izinga lokushisa kanye namazinga okupholisa, ukuhluka kwezinga eliphezulu nokucindezela kwamanzi.
Ukusakaza nokugqoka ama-ultrasonics kuvumela ukuthintana okungaphezulu kwe-Solute / solvent ukuze usawoti uqedwe ngokushesha kakhulu emanzini okwenza i-uniform brine.
I-solubility yezinto eziningi zokwakha iyanda ngamazinga okushisa aphakeme. Ku cavitational ama-hot-spot, amazinga aphezulu okushisa angafika ku-5000K futhi amazinga okupholisa okusheshayo angenzeka, okusiza izinqubo zokuqeda. Usawoti uphelelwa ngaphandle kwe-agglomerate-free, ukufeza a uzinzile umkhiqizo we Ikhwalithi ephezulu. Ngemuva kokuqedwa kwenqubo, i-ultrasound ingasetshenziswa ukuxuba i-brine ngokuvumelana nomkhiqizo wokugcina.
Ukuguquguquka kokucubungula kwe-ultrasonic kuvumela ukulungiswa okusheshayo nokulula kwe-sonication ezidingweni ezithile ukuze ukuhlanganiswa kwe-brine kungakulungiswa ngqo kuzidingo ezithile.
Izinsiza ze-Ultrasonic ze-Brine Ukulungiselela
I-Ultrasonic ukuqedwa izithako kungenziwa njengoba ibhethri futhi eqhubekayo emugqeni inqubo. Ukuqhuma okukhulu kwe-ultrasonic nokugaya izinto eziseketshezi kuhlinzeka ngokuqedwa okusheshayo nokuphumelelayo. Kungakhathaliseki ukuthi kuyadingeka yini, okuphakeme noma ngisho nokuningi-saturation, i-power ultrasound inikeza ukuxuba okunokwethenjelwa kwamazinga aphezulu okuqedwa.
Imishini ye-ultrasonic evela 50W kuya 16,000W iyunithi ngayinye iyatholakala ukuze igcwaliseke ngokwethenjelwa ukuqedwa kunoma yiluphi uhlelo lwesilinganiso. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher aqinile kakhulu, adinga ukugcinwa okuphansi kuphela futhi akhiwe 24/7 enzima kakhulu ukusebenza.
Isethaphu nge 1000W iprosesa ye-ultrasonic, flow flow cell, ithangi kanye nepompo
Ukukhishwa Kwezinga eliphezulu
Ukuphakanyiswa Okuphezulu / I-Oversaturation
Umkhiqizo Wekhwalithi Ephakeme
ethembekile & okuqinile